7-da Timo Dhex Dheer Ee Ugu Fiican Ee Ragga Loo Jarayo | Ragga Stylish
Timo jarista dhererka dhexe
Miguel Serrano | | Daryeelka shaqsiyeed, Timaha
Timo-jarista dhexda-dheer ayaa moodada ah, markaa haddii aad qorsheyneyso wax-ka-beddel, waa fikrad fiican inaad maskaxda ku hayso. Laakiin maxay dhab ahaan yihiin? Mid aad u fudud: sida magaceedaba ka muuqata, waxaa lagu cabiraa kalabadh inta udhaxeysa timaha gaaban iyo manka buuxa.
Mid ka mid ah furayaasha caannimadooda ayaa ah inay kala jaad yihiin. Waxay kuu oggolaanayaan inaad tijaabiso noocyo kala duwan oo timo. iyadoo loo eegayo baahida munaasabad kasta iyo xitaa niyaddaada. Haddii aad ka walwalsan tahay sahlanaanta, waxaa xusid mudan in inkasta oo qaar ka mid ah ay sii faahfaahsan yihiin, badankooduna ay u dhowdahay sida ugu dhakhsaha badan uguna fudud sida timaha gaaban:
1 Dhexdhexaad dherer leh oo leh kala-tag dhexda
2 Timo-jaraha dherer-dherer saddex-geesood ah
3 Timo jarista dhererka dhexdhexaadka ah
4 Timo jar nus dherer ah gadaal
5 Timo jarid dherer dhexdhexaad ah oo leh jajab
6 Timo jarid dherer dhexdhexaad ah oo siddeetan taabasho leh
7 Timaha dhaadheer ee dhexdhexaadka ah oo la ururiyey
Dhexdhexaad dherer leh oo leh kala-tag dhexda
Brad Pitt wuxuu xirtaa timahiisa dhaadheer, ficil ahaan garbihiisa, filimka zombie 'World War Z'. Si aad u dhaqan geliso, marka lagu daro inaad timahaaga u korodho muddo dheer oo kugu filan, waa inaad timahaaga u qaybisaa laba qaybood oo ka badan ama ka yar oo siman qaybta hore ee dhexda. Ka dibna waa inaad u dhaaftaa dhagahaaga gadaashiisa. Waa timo fudud laakiin waxtar leh.
Timo-jaraha dherer-dherer saddex-geesood ah
Timothée Chalamet waxay run ku ahaaneysaa timo jarista dhererka dhexe. Jilaagu wuxuu jecelyahay inuu ku ciyaaro wejiga hore ee wajigiisa, sida uu ku muujiyey horyaallo iyo muuqaalo kala duwan. Halkan waxay ku xiraneysaa timaheeda dhagaha dhagaha iyadoo qeybta kala tagga ah. Qeexitaanka qaybta sare oo ay weheliyaan hirarka ka soo baxa dhexda hoose waxay siinaysaa goynta jilaaga 'Igu soo wac magacaaga' qaab saddex xagal jilicsan.
Timo jarista dhererka dhexdhexaadka ah
Haddii aad doorbideyso timo-dhejis dherer dhexe ah oo aan u muuqan mid aad loo qorsheeyay, Jason Momoa wuxuu ku siin karaa xoogaa dhiirigelin ah. Caan ku ah kaqeybgalkiisa 'Game of Thrones' iyo 'The Justice League', Hawaiian ayaa xambaarsan timaha dabacsan ee ruxruxaya ee qaab surfer ah. Si loo helo saameyntaas duurjoogta ah, waa inaad u oggolaataa inay koraan iyada oo aan faragelin badan la helin. Markaad shanleyneyso, waa inaad had iyo jeer raadisaa cillad. Sidoo kale waa inaad sameysaa dadaal si aad u ilaaliso dabacsanaanta iyo dabiiciga.
Timo jar nus dherer ah gadaal
Jilaaga 'Wiilasha Fowdada' ayaa xirta timo qoorta oo loo qaabeeyey qaab raganimo leh. Waa cabir ka gaaban kuwii hore, laakiin timaha ayaa ku filan in lagu hirgeliyo qaababka timaha ee kala duwan. Charlie Hunnam waxaa ka go'an inuu wax walba dib u shanleeyo isagoon culeys badan saarin, sidaa darteed dhammaadyadu waxay sii wadaan dhaqdhaqaaqa.
Timo jarid dherer dhexdhexaad ah oo leh jajab
Jared Leto wuxuu had iyo jeer maareeyaa inuu layaabo isbeddelkiisa muuqaalkiisa. Halkaan jilaaga iyo heesaha ayaa la socda gadhkiisa dheer ee a Timo dherer dhexdhexaad ah oo leh buss iyo buuq qasan. Dhinacyada, timuhu waxay daboolaan dhegaha. Timahaani waxay jilcin doonaan astaamahaaga waxayna ku siin doonaan hawo dhalinyaro ah. Khasaaradihiisa waxaa ka mid ah inay tahay mid ka mid ah xulashooyinka qaadan doona waqtiga ugu badan subaxa hore.
Timo jarid dherer dhexdhexaad ah oo siddeetan taabasho leh
Johnny Depp wuxuu soo maray timo badan oo dhexda-dheeman ah oo kala duwan intii uu ku guda jiray xirfadiisa, isaga oo ka dhigaya dhererkan timaha mid ka mid ah astaamaha lagu garto, iyada oo fasax laga haysto ridiisii ​​iyo sawiradii. Xaaladdan oo kale raac dhadhanka bilicsanaanta mugga leh ee calaamadeeyay 1980-meeyadii iyo horraantii 90-meeyadii. Xaqiiqdii waa wakhti fiican oo la isku dayo hadda in xummad weyn loo soo daayay wax kasta oo la xiriira 80-meeyadii.
Joe Keery (oo ugu ciyaara Steve taxanaha 'Waxyaabaha Shisheeyaha') ayaa ka qayb qaatay taxaddar la'aantaas isku dhafka timaha dhexdhexaadka ah, taabashada iyo timaha gadaasha dhagaha soddon sano ka dib ayay ku soo noqotay moodadii. Waxaan ka hadleynaa 80-meeyadii, sidaa darteed sida muuqata isticmaalka timaha timaha waa lagama maarmaan. Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay jilaaga, sirta timahiisa kuma jiraan farriinta Farrah Fawcett, sida Steve u sheegay Dustin xilli ciyaareedkii labaad ee taxanaha balwadda, laakiin hiddo-wadaha. Jilaagu wuxuu xaqiijinayaa inuusan u baahnayn inuu wax badan sameeyo si uu sidan ugu ekaado. Kaliya wuu maydhaa laba ama saddexdii maalmoodba mar.
Timaha dhaadheer ee dhexdhexaadka ah oo la ururiyey
Soo qaadista timahaaga badh ayaa ku siin doona hawo miskiin ah. Sidoo kale waa wax kale oo caan ah oo caan ah oo badan oo timo dhaadheer ay isticmaalaan markay tahay inay ka soo qayb galaan dhacdo qurux badan. David Beckham wuxuu xirtaa agagaarka nape iyo dhabarka. Ciyaaryahankii hore ee kubada cagta ayaa fahamsan in munaasabadan ay u baahan tahay nadiifinta qoorta timahana waxaa lagu soo uruuriyaa dhabarka dambe ee madaxa iyada oo loo marayo rooti dherer dhexdhexaad ah oo fudud.
Jilaaga taxanaha 'Poldark', Aidan Turner, Waxay u foorarsataa bun weyn si ay u soo qaadato timaheeda dhererka dhexe. Doorashadan, oo sidoo kale loo yaqaan timo samurai ah, ayaa loo tixgeliyaa inay sida ugu fiican ugu shaqeyso dhowr xargo oo dabacsan halkan iyo halkaas. Laakiin taasi waa arrin doorbid shakhsi ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timo jarista dhererka dhexe
Kabaha Oxford: goorta iyo sida loo xirto muuqaalkan casriga ah ee Ingiriiska
Cuntooyinka leh folic acid